အများဆုံးငွေစုနှင့်အတူဆေးညွှန်းကူပွန် 10 - ကုမ္ပဏီ | ဇန္နဝါရီလ 2022
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ဖျော်ဖြေရေး ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း နှိပ်ပါ ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ပြင်းထန်သောအားကစား ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, သတင်း
အဓိက >> ကုမ္ပဏီ >> SingleCare သုံးစွဲသူများသည်ဤဆေး ၁၀ မျိုးအတွက်အကြီးမားဆုံးသောငွေစုငွေကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်
SingleCare သုံးစွဲသူများသည်ဤဆေး ၁၀ မျိုးအတွက်အကြီးမားဆုံးသောငွေစုငွေကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်
ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမေရိကန်များသည်တစ်နှစ်လျှင်ဆေးညွှန်းဆေးများကိုပိုမိုသုံးစွဲကြသည် ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားကမ္ဘာပေါ်မှာ ။ အကြောင်းပြချက်များပြားသည် စည်းမျဉ်းများမရှိခြင်း , မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အတွက်စျေးနှုန်းမြင့်တက်နှင့်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်။ ခြုံငုံရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်း။ ပျမ်းမျှစားသုံးသူမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်အဘယ်အရာကိုသတိပြုမိသည်မဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်နိုင်သည့်အခါနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကိုရှာဖွေရန်ခဲယဉ်းသည်။
ဆေးညွန်းဆေးများအတွက်စျေးနှုန်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည်ဆေးဝါးများရရန်ရုန်းကန်နေရသောအမေရိကန်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း SingleCare မှဖော်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်း၏ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Phail.D Shaili ကပြောကြားသည်။ အတော်များများကသူတို့သည်ဆေးညွှန်းများနှင့်ဆေးဝါးများအတွက်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီသောဆေးများကိုသက်သာရာရစေရန်ဆေးညွှန်းလျှော့စျေးနှင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဝယ်ယူနိုင်သည်။
မတူကွဲပြားသောဆေးဝါးများသည်စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးတွင်တူညီသောဆေးညွှန်းကိုမကြာခဏဖြည့်ရသည်။ SingleCare ရဲ့အတူ ဆေးညွှန်းလျှော့စျေးကဒ် , သင်သည်ဒေသခံဆေးဆိုင်များနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်သင့်ရဲ့ငွေစုတိုးမြှင့်နိုင်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးညွှန်းစာကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည် ဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ်အသုံးပြု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို ။ SingleCare ၏ဆေးညွှန်းအထူးလျှော့စျေးသည်သင့်အား ၈၀% သက်သာစေနိုင်သည်။
SingleCare ၏စျေးနှုန်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုဇယားကသင့်အားငွေသားစျေးနှုန်းကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွက် SingleCare စုဆောင်းမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်စေသည်ဟု Pharm.D Ramzi Yacoub ကပြောကြားခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်၏အာမခံကြေးထက်နိမ့်ပါကသင်ငွေစုဆောင်းနေကြောင်းသင်သိသည်။
သင်သည်ကူပွန်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်စာပို့နိုင်သည်၊ ချက်ချင်းပုံနှိပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်၏ SingleCare ကူပွန်ကိုဆေးဆိုင်ကောင်တာသို့ယူဆောင်လာပါ။
သင်၏ဆေးဝါးများအတွက်သင်၏ဆေးဆိုင်၏ငွေပမာဏကိုမတွက်ပါနှင့်။ SingleCare ၏ဆေးညွှန်းကူပွန်သည်ဆေးညွှန်းသောက်သောဆေး ၁၀,၀၀၀ ကျော်အပေါ်အချိန်နှင့်တပြေးညီငွေစုဆောင်းနိုင်သည်။ ဤတွင်လူကြိုက်များသောမူးယစ်ဆေးဝါး ၁၀ မျိုးပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါး SingleCare အသုံးပြုသူများမှသိမ်းဆည်းထားသောရာခိုင်နှုန်း * ကူပွန်ကိုရယူပါ
Lamotrigine ER ၉၁% ကူပွန်ကိုရယူပါ
Salicylic acid ၈၈% ကူပွန်ကိုရယူပါ
Dapsone ၈၇% ကူပွန်ကိုရယူပါ
Diphenhydramine ၈၆% ကူပွန်ကိုရယူပါ
မင်္ဂလာပါ 84% ကူပွန်ကိုရယူပါ
Anastrozole ၇၉% ကူပွန်ကိုရယူပါ
Repaglinide ၇၅% ကူပွန်ကိုရယူပါ
Enoxaparin ဆိုဒီယမ် ၇၄% ကူပွန်ကိုရယူပါ
Clonidine 73% ကူပွန်ကိုရယူပါ
ယူရီးယား 73% ကူပွန်ကိုရယူပါ
*၂၀၂၀ ဇွန်မှ CVS ရောင်းအားအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံသည့်ရာခိုင်နှုန်း။ စုဆောင်းငွေရာခိုင်နှုန်းသည်လက်လီဆေးဆိုင်များနှင့်ကွဲပြားပြီးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ကယ်တင်ခြင်းရာခိုင်နှုန်း - ၉၁%
Lamotrigine ER , များအတွက်ယေဘုယျ Lam , ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်သိမ်းယူမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ anticonvulsant ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုစိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါကုသမှုအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်။ ဤဆေးသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ဖြစ်သော်လည်းအဓိကအားဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးဆေးဆိုင်များတွင် Lamotrigine ER ၏ပုံမှန်ငွေသားစျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၅၀၀ အထိရှိနိုင်သည်။ SingleCare ကဒ်သုံးစွဲသူများသည်ဒေါ်လာ ၅၀ အောက်သာရှိသည်။
ကယ်တင်ခြင်းရာခိုင်နှုန်း - ၈၈%
Salicylic acid ဝက်ခြံအပါအ ၀ င်အရေပြားအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကုသရန်အသုံးပြုသည့်လိမ်းဆေးဖြစ်သည်။ သငျသညျကောင်တာကျော်နိမ့်အစွမ်းသတ္တိ salicylic acid ကိုဝယ်နိုင်နေစဉ်, အချို့ အခြေအနေများဆေးညွှန်း - အစွမ်းသတ္တိကိုလိုအပ်သည် ။ ဆေးဆိုင်ကောင်တာ၌, salicylic acid ၏ဆေးညွန်းစွမ်းအားသောက်သုံးမှုသည်အကုန်အကျများနိုင်သည်၊ သို့သော် SingleCare ငွေစုဖြင့်မဟုတ်ပါ။
ကယ်တင်ခြင်းရာခိုင်နှုန်း - ၈၇%
Dapsone အရေပြားအခြေအနေများဖြစ်သည့်ပြင်းထန်သောဝက်ခြံကဲ့သို့ကုသရန်သတ်မှတ်ထားသောပantibိဇီဝဆေးနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်သည့် Rx ဖြစ်သည်။ ဤယေဘုယျဆေးသည်ဂျယ်လ်သို့မဟုတ်တက်ဘလက်များတွင်ရရှိနိုင်သည်၊ Dapsone သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ဖြစ်သော်လည်း SingleCare ကဒ်မပါဘဲတစ်မိနစ်အတွက်ငွေစျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၅၀၀ ထက်ကျော်လွန်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကယ်တင်ခြင်းရာခိုင်နှုန်း - ၈၆%
Diphenhydramine မကြာခဏ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့်လူသိများ Benadryl , တစ် ဦး antihistamine ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကြောင်ကိုဓါတ်မတည့်ခြင်း (သို့) လေထဲ၌ဝတ်မှုန်ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပြုလုပ်လျှင်၎င်းသည်နှာချေခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အုံမှသို့မဟုတ်အခြားဓာတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာများမှသက်သာရာရနိုင်သည်။လူအများစုကဤကဲ့သို့သောဆေးဝါးများရောင်းဝယ်မှုကိုလျှော့စျေးဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်ကိုသတိမပြုမိကြပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံဆေးညွှန်းတောင်းရန်အတွက်သာဖုန်းခေါ်သည်။SingleCare ကူပွန်ဖြင့်ငွေစျေးနှုန်းမှ ၈၆% အထိသိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်မတည့်ခြင်းသည်ရာသီတစ်ခုလုံးကြာရှည်နိုင်သည် (သို့) ထိုထက် ပို၍ ကြာရှည်ပါကဓါတ်မတည့်မှုသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပါကထိုစုဆောင်းမှုသည်ရေရှည်တွင်တက်နိုင်သည်။
ကယ်တင်ခြင်းရာခိုင်နှုန်း - ၈၄%
မင်္ဂလာပါ နာကိုလက်စ်စီနှင့်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းကဲ့သို့သောနာတာရှည်အိပ်စက်ခြင်းအခြေအနေများကိုကုသသောလှုံ့ဆော်သူဖြစ်သည်။ Modafinil ကိုယေဘူယျအဖြစ်မကြာခဏသတ်မှတ်သည် နင် နှင့် ထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာ ။ SingleCare လျှော့စျေးကဒ်သုံးစွဲသူများသည် ၈၄% အထိစုဆောင်းနိုင်ပြီးဆေးဝါးကောင်တာရှိပုံမှန်ငွေသားများထက်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီ။ ပေးဆပ်နိုင်သည်။
ကယ်တင်ခြင်းရာခိုင်နှုန်း - ၇၉%
Anastrozole ယေဘူယျ Arimidex သွေးဆုံးပြီးသောအမျိုးသမီးများအတွက်ရင်သားကင်ဆာကိုကုသရန် (ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကဲ့သို့) အခြားကုသမှုများနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုသောဆေးလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအီစရိုဂျင်ပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အန္တာရာယ်ရှိသောအမျိုးသမီးများအတွက်ရင်သားကင်ဆာကာကွယ်ရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အပြည့်အဝစျေးနှုန်းပေးပြီးသည့်အခါဆေးလုံးအဖြစ်ယူသည်။ SingleCare သုံးစွဲသူများသည် ၇၉% အထိချွေတာသောငွေပမာဏ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာပေးသည်။
ကယ်တင်ခြင်းရာခိုင်နှုန်း - ၇၅%
Repaglinide အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်ပေးသောခံတွင်းဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဂလူးကို့စ်ကိုပျံ့နှံ့စေရန်အင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဒါဟာအစားအစာများမီ, ဒါကြောင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာနေ့စဉ် - သင်ဆေးထိုးလက်လွတ်ချင်ကြဘူး။ SingleCare မရှိရင်ဒီကုသမှုကဒေါ်လာရာပေါင်းများစွာကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းအပေါ် 75% စုဆောင်းနှင့်အတူကြောင့်အများကြီးပိုတတ်နိုင်ပါတယ်။
8. Enoxaparin ဆိုဒီယမ်
ကယ်တင်ခြင်းရာခိုင်နှုန်း - ၇၄%
Enoxaparin ဆိုဒီယမ် ( ယေဘူယျ Lovenox ) များသောအားဖြင့်ခြေထောက်များနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများရှိသွေးခဲခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သတ်မှတ်ထားသောဆေးထိုးဆေး anticoagulant ဖြစ်သည်။ ဤစာရင်းရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများနည်းတူလူနာများသည်ပြင်းထန်စွာကုသရန် enoxaparin ကိုအသုံးပြုသည်။ အသက်အန္တရာယ်အခြေအနေများ ။ Enoxaparin ကိုခွဲစိတ်ကုသမှုများမှသက်သာရာရရန်သို့မဟုတ်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်အိပ်ရာဝင်သူများအားမကြာခဏညွှန်းဆိုလေ့ရှိသည်။ နှလုံးရောဂါ၏အမေရိကန်ကောလိပ် ။ ဈေးကြီးသောဆေးကောင်တာနှင့်အတူအခြားဆက်စပ်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များအပြင် enoxaparin ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမြင့်တက်လာသည်။
ကယ်တင်ခြင်းရာခိုင်နှုန်း - ၇၃%
Clonidine သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ဆေးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်စေ၊ အခြားဆေးညွှန်းများနှင့်ဖြစ်စေပေါင်းစပ်သည်။ ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ် counterpart, ကာဗာ ADHD ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန်အသုံးပြုသည့် FDA မှအတည်ပြုသည့် non-stimulant ဆေးဖြစ်သည်။ SingleCare ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်၎င်းသည်လက်လီဈေး၏လေးပုံတစ်ပုံအောက်လျော့နည်းနိုင်သည်။
ယူရီးယား Utopic, Aluvea, Aqua Care, Atrac-Tain နှင့်အခြားသူများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမျိုးမျိုးအောက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ယေဘုယျဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောနှင်းခူသို့မဟုတ် psoriasis အဖြစ်အရေပြားအခြေအနေများကုသရန်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ပျက်စီးသွားသည့်လက်သည်းများထံမှပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လည်းကူညီနိုင်သည်။ ပြွန်တစ်မျိုးတည်းသည်စျေးအလွန်ကြီးနိုင်သည်၊ သို့သော် SingleCare သုံးစွဲသူများသည်ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်အပေါ် ၇၃% အထိချွေတာနိုင်သည်။
ယူအက်စ်တွင်ရှိသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည်သင်လိုအပ်သောဆေးညွှန်းများအတွက်အလွန်အကျွံမပေးဆောင်ဘဲလုံလောက်သောစျေးကြီးသည်။ SingleCare ကဒ်ဖြင့်သင့်အားသက်သာမှုရစေရန်ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းများကိုသင်ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်၏ဆေးကိုသာရှာဖွေပါ ချစ်သူ သို့မဟုတ် SingleCare အက်ပလီကေးရှင်း (ထိုတွင်ရနိုင်သည် အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး ဒါမှမဟုတ် Google Play ) ။ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကိုသင်တွေ့ရှိပြီးတာနဲ့ဆေးညွှန်းကူရှင်ထံမှာသင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းကူပွန်ကိုယူဆောင်လာပါ။ ဒါလွယ်ကူပါတယ်! သင် SingleCare နှင့်သင်ဖြည့်သောပထမ Rx တွင်အပိုဒေါ်လာ ၅၀၀ ကိုအလိုလျောက်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်သည်အသင်းဝင်ငွေစုပြီးနောက်၎င်းအချိန်တိုင်းအချိန်ကုန်ခံပြီးသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပဋိသန္ဓေတားဆေး patch အလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲ
ငါ lactose သည်းမခံတာငါဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
h သည်တစ်ဖက်တွင် ၁၁၅